15% U Isticmaal Warbaahinta Bulshada Si Aad U Hesho Ganacsi Maxalli Ah | Martech Zone
Isniin, April 29, 2013 Isniin, April 29, 2013 Douglas Karr
Ma ogtahay in boqolkiiba 15 macaamiisha ay adeegsadaan baraha xiriirka bulshada si ay u raadiyaan ganacsiyada maxaliga ah? Shirkado aad u tiro badan ayaa ka lumay fursadda ay ku horumarin lahaayeen bulshadooda ku dhex jirta warbaahinta bulshada, iyagoo gacan ka geysanaya koritaanka maamulkooda iyo ka warqabka shabakadaha dadka aadka u daneynaya wax soo saarkooda iyo adeegyadooda. Xitaa kuwa aqoonsada fursadda wali way ku dhibtoonayaan inay fuliyaan, in kastoo.
Waan ka wada hadalnay Qalabaynta qalabaynta suuqgeynta maxalliga ah ee Balihoo on blog hore. Dhawaan waxay sii daayeen macluumaadkan xaqiiqooyinka warbaahinta bulshada ganacsi kasta waa inuu ka feejignaadaa.
Tags: Balihoootomaatiga suuq geynta deegaankaraadinta maxalliga ahotomaatiga suuqgeynta raadinta deegaankaxaqiiqooyinka warbaahinta bulshada
Apr 30, 2013 at 10: 30 AM
Cinwaankan infographic-ka ah ayaa ka maqan ereyga "Kaliya". Ka dib markii la isbarbar dhigo 11% macaamiisha ayaa wali isticmaala bogagga jaallaha ah ee daabacan. Warbaahinta bulshada maahan goob lagu baaro degaanka (ugu yaraan, weli ma ahan).